Tenerife na-emepụta ụlọ ọrụ nlekota ọkụ mgbawa ọhụrụ | Network Meteorology
Tenerife na-emepụta ụlọ ọrụ nlekota ọkụ mgbawa ọhụụ
Mgbe ị bi n’àgwàetiti mgbawa ọ dị ezigbo mkpa ịmụ ugwu mgbawa iji chebe ọnụ ọgụgụ ndị bi na ya. Ma nke ahụ bụ kpọmkwem ihe Tenerife mere. Dị ka ọ dị ugbu a, ọ nwere usoro mgbawa ugwu nke ihe ndị mejupụtara 15 seismographs Ọpụrụiche ga - enyere gị aka ịchọpụta ala ọma jijiji ndị na - enweghị ike ịchọpụta ugbu a.
Stationslọ ọrụ nlekota ala ọhụụ ọhụrụ ga-anọ ọdụ n'ụzọ dị mkpa na isi okwu anọ nke ókèala ahụ.
Usoro ahụ ga-aba uru nke ukwuu, ebe ọ bụ na ọ ga-ekwe ka ndekọ mmegharị ke subsoil na ot seismographs adịghị ịchọpụta. N'ihi ya, n'ihi egwu na-aga n'ihu banyere mgbawa ugwu, ndị ọkachamara ga-enweta akara ngosi dị mkpa tupu oge eruo, site na ala ọma jijiji na-adọ aka ná ntị banyere ihe egwu ọ bụla. Mana, na mgbakwunye, ndị mmadụ ga-enweta ozi mmụta zuru oke iji mara ihe ga-atụ anya ma ala ọma jijiji na ugwu mgbawa.
Nke a bụ nnukwu nkwa nke gburugburu nke gburugburu ebe obibi Teknụzụ na ume ike Institute (ITER) nke ọkà mmụta banyere ugwu mgbawa Nemesio Pérez na-eduzi na ndị otu ya ejirila nke ọma Luca D'Auria, nke na-ahụ maka ileba anya na Vesuvius, otu ugwu mgbawa kachasị dị egwu n'ụwa dịka ọ dị na mpaghara ọtụtụ ndị mmadụ bi.
Iji mezue ya, Teide Supercomputer, arụnyere na ITER, ga-arụ ọrụ data na oke ọsọ, nke ga-enye ohere nyocha ozi nke seismograph na-anakọtara ma na-eche echiche na data ọ nakọtara, ebe »seismographs nwere GPS ma mekọrịta ya na ibe ya na obere njehie nke puku ise nke abụọ», Manuel Cendagorta kwuru, onye isi njikwa ITER.
Tenerife bụ agwaetiti mgbawa ugwu ebe ala ọma jijiji nke obere ike na-eme mgbe niile, mana otu nke dị ukwuu 6 ma ọ bụ karịa nwere ike ịmalite, dị ka D'Auria si kwuo, ya mere ọ dị mma iji kwadebe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Tenerife na-emepụta ụlọ ọrụ nlekota ọkụ mgbawa ọhụụ
Argos, mmiri ozuzo mbụ oyi kpuchiri United States
A katọrọ enweghị Spain na nkwekọrịta Paris